Adobe Spark dia taranaka vaovao an'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Adobe Spark no taranaka vaovao an'ny Photoshop
Tahaka ny olona maro hafa, fantatray ny fitaovana fanovana sary ary ho an'ny famolavolana sary Photoshop, izay novolavolain'ny Adobe Systems Incorporated. Ity fampiharana ity dia nampiasaina indrindra ho an'ny manova na mamerina mamerina sary na sary izay tena tianay indrindra, fa ny anarany amin'ny teny espaniola dia manana ny hevitry ny "atrikasa an-tsary".
Izy ihany koa no manana io toerana io isa voalohany eny an-tsena amin'ireo fitaovana izay ampiasaina amin'ny fanitsiana sary ary manjaka ihany koa amin'ity faritra ity, ka izany no antony nampiasana ny anarany ho synonyona raha ny amin'ny fanatanterahana an'io asa io.
1 Lazainay aminao kely ny fiantombohan'ny Adobe Spark
2 Inona no atao hoe Adobe Spark?
Lazainay aminao kely ny fiantombohan'ny Adobe Spark
Azontsika atao ny milaza fa nisy ny fiandohany tamin'ny 1987, raha i Thomas Knoll, izay mpianatra tao amin'ny University of Michigan, dia afaka nanoratra programa tao amin'ny Macintosh Plus, mba hampisehoana sary grayscale ary haseho amin'ny efijery monochrome.
Ity programa ity, izay antsoina hoe Display, dia loharanom-pahalalana ho an'ny rahalahiny John Knoll, izay mpiasa tao amin'ny orinasa Industrial Light & Magic, izay nanoro hevitra an'i Thomas mba hamadika ny fandaharan'asany ho iray izay miasa tanteraka amin'ny fanovana sary. Mazava ho azy, ary efa tamin'ny 1988, dia nanoratra ny Kaody fampisehoanaMba hahafahana mampiditra azy eo amin'ny efijery miloko sy miasa miaraka, dia afaka nanitatra ny fahaizan'ilay fandaharana ireo rahalahy. Toy izany koa, i Thomas dia nanatsara ny fahafahan'ny fitaovana afaka mamaky sy manoratra amin'ny endrika samihafa, raha i John kosa namelatra ny fampiasana ny fanodinana sary izay nahazo ny anaran'ny sivana taty aoriana.
Ao amin'ny kinova voalohan'ny Adobe Photoshop, ny programa dia niasa tamina habaka iray misy sosona tokana, izay azo ampiharana karazana effets, endritsoratra, marika ary fitsaboana isan-karazany. Androany dia manatanteraka ny asany mitovy izy io saingy mampiasa sosona maromaro.
Ny fampiharana amin'ny lafiny iray dia nanjary, azontsika atao ny milaza fa hatramin'ny nanombohany, ao amin'ny fitaovana mahazatra hanovana sary, fa tsy izany ihany, fa ampiasaina ihany koa ho an'ny taranja maro amin'ny famolavolana sy ny sehatry ny fakana sary toa azy, toy ny fanaovana photocomposition, famolavolana pejin-tranonkala na hetsika hafa mila fitsaboana amin'ny sary nomerika.
Ny maha Adobe Photoshop fitaovana lehibe amin'ity faritra ity dia misy ihany koa izay mety ho lasa mpisolo an'ity programa ity, koa amin'ity lahatsoratra ity dia mampahafantatra anao ny momba ilay programa izahay Adobe Spark, ny taranaka vaovaon'ny Photoshop.
Inona no atao hoe Adobe Spark?
Taona vitsivitsy lasa izay dia nanomboka nandefa fangatahana ho an'ny iOS ny orinasa Adobe, izay afaka namela ny olona hanao ny azy manokana famoronana votoaty hita maso ary miaraka amina dingana mora kokoa. Fitaovana toy ny Adobe Post, Adobe Slate ary Adobe Voice, izay nanapa-kevitra ny orinasa fa ampidirina amina fanohanana tokana miaraka amin'ilay kinova ao amin'ny Internet fantatra amin'ny hoe Adobe Spark
Fantatra izany, ny programa Adobe Spark dia ahitana ireo fitaovana Lahatsary Spark, Spark, pejy ary Spark post, izay fitaovana azonay andrana amin'ny tranokala spark.adobe.com tsy andoavam-bola. Mazava ho azy fa mila kaonty mpampiasa Adobe isika na amin'ny fahasamihafany dia afaka miditra amin'ny kaonty Google na Facebook-nay isika.
Hatramin'ny nanaovantsika an'io, hanana interface eo alohantsika isika tsotra sy intuitive, izay mametraka antsika ny fanontaniana eo an-tampony momba ny zavatra tianay hamorona. Ny safidy aseho dia aseho amin'ny bokotra telo amin'ny manga, maitso ary mena, izay mifanitsy amin'ny fitaovana an'ny Alefaso, Pejy ary horonan-tsary, izay samy manana famaritana fohy momba ny asany avy.
Etsy ankilany, azontsika atao ny manonona ny mety hanoloran'ity programa ity antsika hanatanteraka tetikasa iray avy amin'ny fitaovantsika finday ary hahafahantsika mamita azy io amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny tranonkala na mety ho amin'ny fomba hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Adobe Spark no taranaka vaovao an'ny Photoshop
Marcel Patrick Craig Fields dia hoy izy:
Tsiambaratelo i Noo adobe spark.
Valiny tamin'i Marcel Patrick Craig Fields
Mauro Sanchez dia hoy izy:
Mbola tsy azoko hoe inona izany
Valiny tamin'i Mauro Sánchez
Carlos Pachas dia hoy izy:
Inona ny lohateny adala Adobe Spark amin'ny famoronana afisy sy lahatsoratra amin'ny tambajotra sosialy, ny Photoshop dia ho an'ny fanovana sary -_-
Valiny tamin'i Carlos Pachas
Eduardo Jorquera dia hoy izy:
Dude Lightroom izany, ny photoshop dia mihoatra ny sary.
Valiny tamin'i Eduardo Jorquera
Mamorona logo maimaim-poana